တရားဝင် Android Nougat တွင် Samsung Galaxy S6 Edge Plus အတွက် Root and Recovery | Androidsis
တရားဝင် Android Nougat တွင် Samsung Galaxy S6 Edge Plus အတွက် Root and Recovery
Francisco Ruiz | | အန်းဒရွိုက် Recovery ကို, Android Root ပါ, Samsung, လဲ tutorial, Android ဗားရှင်း
မနေ့ကငါပြမယ် Samsung Galaxy S6 Edge Plus အား Odin သုံး၍ Android Nougat သို့ကိုယ်တိုင် update လုပ်နည်း Knox မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်တိုးမြှင့်ခြင်းမရှိဘဲနောက်ဆုံးပေါ်တရားဝင်လေယာဉ်တင်သင်္ဘော firmware သည်ယခုသင်ခန်းစာ၏အလှည့်ဖြစ်သည် TWRP Recovery ကိုဘယ်လို flash လုပ်မလဲ Samsung ကို root လုပ်ပါ Galaxy S6 Edge Plus သည်နောက်ဆုံးပေါ်တရားဝင် firmware Android 7.0 Nougat တွင် Samsung ဖြစ်သည်.
ဤအခါသမယတွင်နှင့်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းငါသတိ ပေး၍ သတိပေးရမည် အကယ်၍ ၎င်းသည် Samsung Knox ၏တောက်ပသောတန်ပြန်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးမည်ဆိုပါက, TWRP Recovery ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကို flash ဖြစ်အောင်လုပ်ရန် terminal ၏ bootloader ကိုသော့ဖွင့်တော့မည်။ Magisk Manager မှကျေးဇူးတင်ရလျှင်စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော Root permissions ။
ကျွန်တော်ဒီ post ရဲ့အစမှာသင့်ကိုဗီဒီယိုထဲချန်ထားခဲ့တဲ့ဒီလက်တွေ့ကျသော Android tutorial ကိုလေ့လာနိုင်ဖို့ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက Samsung Galaxy S6 Edge Plus ရဲ့ settings ကိုရိုက်ထည့်ခြင်းနှင့် developer ရွေးချယ်စရာကို enable About the Device အကြောင်းအရင်ထည့်ပါ။ ထို့နောက် Information of Software တွင်နောက်ဆုံးတွင်ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်နံပါတ်ကိုရွေးရန် Compilation Number ကိုရွေးပါ။
ဤအရာပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ Samsung ၏ချိန်ညှိချက်များတွင်ပါသောရွေးစရာအသစ်၊ Developer ရွေးစရာများနှင့် ကျနော်တို့ OEM Unlock ခလုတ်ကိုနှင့် USB debugging ခလုတ်ကို enable ညာဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိခလုတ်ကိုဆက်လက်ရှင်သန်နေသည်ကိုစစ်ဆေးခြင်းအပြင်။
1 တရား ၀ င် Android Nougat တွင်ပြုပြင်ထားသော Recovery ကို Samsung Galaxy S6 Edge Plus SM-G928F တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
2 Official Android Nougat ပေါ်မှာ Samsung Galaxy S6 Edge Plus ကို Root လုပ်နည်း
တရား ၀ င် Android Nougat တွင်ပြုပြင်ထားသော Recovery ကို Samsung Galaxy S6 Edge Plus SM-G928F တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
ပထမဆုံးလုပ်မှာက Odin ကိုဒီ link မှကူးယူပါSamsung Galaxy S6 Edge Plus အား Android Nougat သို့မည်သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရမည်ကိုသင်ကြားပေးသည့်သင်ခန်းစာတွင်မနေ့ကကတည်းကသင် download ပြုလုပ်၍ မရပါ။ ဒီနောက်မှငါတို့လုပ်မယ့်အရာဖြစ်တယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ Samsung Galaxy S6 Edge Plus မော်ဒယ်နှင့်ကိုက်ညီသော TWRP Recovery ကို download လုပ်မည့်ဒီဝက်ဘ်စာမျက်နှာကိုရိုက်ထည့်ပါဤကိစ္စတွင်စာမျက်နှာ၏ထိပ်ပိုင်းတွင်ပထမဆုံးပေါ်လာသည် SM-G928F များအတွက် TWRP.
ပြီးရင် Odin နဲ့ပြေးတယ် AP box ထဲမှာ TWRP Recovery ကိုအရင်အဆင့်မှာဒေါင်းလုပ်လုပ်လိုက်ပါ။ ဒါ့အပြင် Options ကို Check လုပ်ပါ ပြန်လည်နေရာချထားရေး box ကိုမ check လုပ်ထားနှင့်လည်း Auto Reboot box ကိုမဟုတ်ပါဘူး.
ကျွန်ုပ်တို့သည် Odin ကိုထားခဲ့ပြီး Samsung Galaxy S6 Edge Plus နှင့်လုံးဝပိတ်ထားသည် Download mode တွင် Volume Down + Home + Power ခလုတ်များကိုပေါင်းစပ်ပြီးဖွင့်ပါ။ ထို့နောက်ပေါ်လာသည့်သတိပေးမျက်နှာပြင်တွင် volume ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် Download mode သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုသည်။
ယခုတွင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ Odin လည်ပတ်နေသောကွန်ပျူတာနှင့်ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ TWRP Recovery ကို AP box ထဲသို့ထည့်ပြီးကြောင်းထပ်မံစစ်ဆေးပါသည်။ Auto Reboot (သို့) Re-Partition ကိုမရွေးရသေးပါ ပြီးတော့ကျနော်တို့ခလုတ်ကိုပေးပါ စတင်.
လုပ်ငန်းစဉ်သည်စက္ကန့်အနည်းငယ်မျှကြာပြီး Odin ကကျွန်ုပ်တို့အားပေးလိမ့်မည် PASS relapsing အဆိုပါ terminal ကိုမပါဘဲ။ ၎င်းကိုပြန်လည်စတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် volume ခလုတ်များကို + Home + ပါဝါကိုမလွှတ်ဘဲတစ်ချိန်တည်း နှိပ်၍ terminal ကိုပိတ်ထားသည်အထိ၊ မည်သည့်အချိန်တွင်၊ မျက်နှာပြင်မဖွင့်မီ၎င်းကို နှိပ်၍ ဆက်သွားလိမ့်မည်။ Home နှင့် Power ခလုတ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်ဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သော်လည်း volume плюсခလုတ်ကိုနေရာချရန် volume minus ခလုတ်မှလက်ချောင်းကိုလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်.
သင်ကောင်းမွန်စွာလုပ်နိုင်ခဲ့လျှင်သင်သည် TWRP Recovery mode ထဲ၌ရှိနေပြီးကျွန်ုပ်တို့မှ option သို့သွားလိမ့်မည် reboot ပြီးနောက် option ကိုရွေးချယ်ပါ စံနစ်။ ဒီနည်းနဲ့ Terminal ကိုပုံမှန်ပြန်ဖွင့်ပေမဲ့ ROOT မပါပဲ၊ ၎င်းကို root လုပ်ဖို့အောက်ပါအဆင့်တွေကိုလိုက်နာရပါမယ် -
Official Android Nougat ပေါ်မှာ Samsung Galaxy S6 Edge Plus ကို Root လုပ်နည်း
ဂူးဂဲလ်ပလေးစတိုးကိုသွားတယ် ကျနော်တို့ Magisk Manager ကိုလျှောက်လွှာကို download လုပ်, ငါတို့က start နှင့်လက်ဝဲဘက် sidebar ကိုပြသခြင်းဖြင့် Install ကိုပြောသော option ကိုသွားနှင့် option ကိုရွေးပါ လက်ရှိ 12.0 ဗားရှင်းဖြစ်သောနောက်ဆုံးထုတ် Magisk version ကို download လုပ်ပါ.
သက်ဆိုင်ရာ zip ဖိုင်ကိုလမ်းကြောင်းထဲတွင် download ပြီးတာနဲ့ / Magisk မန်နေဂျာSamsung Galaxy S6 Edge Plus အားလုံးဝပိတ်ထားပြီးခလုတ်များပေါင်းစပ်ပြီး Recovery mode တွင်ပြန်လည်စတင်သည် Volume Up + Home + ပါဝါဖန်သားပြင်ဖွင့်ပြီးလျှင် Power ခလုတ်ကိုလွှတ်လိမ့်မည်။ သို့သော် TWRP Recovery မျက်နှာပြင်ပေါ်လာသည်အထိ Home အပေါ်တွင် volume ခလုပ်ကိုဆက်လုပ်ပါမည်။
ပြုပြင်ထားသော Recovery အတွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့ပြီးသွားပါလိမ့်မည် Install သို့မဟုတ် Install option ကိုနှိပ်ပါ ထို့နောက် Magisk ZIP download လမ်းကြောင်း၊ လမ်းကြောင်းသို့သွားပါ / Magisk Manager နှင့် Magisk ZIP ကိုရွေးပါ ကျနော်တို့လျှောက်လွှာသူ့ဟာသူမှ download လုပ်ခဲ့သော။
TWRP ၏အောက်ဘက်ရှိဘားကိုကျွန်ုပ်တို့လျှို့ဝှက်ထားသည်။ စက္ကန့်အနည်းငယ်မျှသာကြာသောမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်စဉ်စတင်မည်၊ Samsung Galaxy S6 Edge Plus ကို Android Nougat တွင်အမြစ်တွယ်ပြီးဖြစ်သည်.
သင် Magisk ZIP ကို ​​flash လုပ်ပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်နိုင်သည် Dalvik နှင့် cache ကိုသုတ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ terminal ကိုပြန်ပြောင်းပါ Restart (သို့) Reboot option ကိုနှိပ်ပါ။
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် Nougat တွင် Root အသုံးပြုသူများဖြစ်လာပါလိမ့်မည် လျှောက်လွှာများ၏ Root permissions ကိုစီမံခန့်ခွဲရန် (သို့) ကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သော Root ကိုဖုံးကွယ်ရန်တာဝန်ရှိသည့် application သည် Magisk Manager application ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်လုပ်ဆောင်ရန်ခက်ခဲသောဖြစ်စဉ်တစ်ခုဟုထင်ရသော်လည်း၎င်းသည်အလွန်လွယ်ကူသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည် တစ်နာရီလေးနာရီမျှအတွင်းမှာပဲ Samsung Galaxy S6 Edge Plu ကိုရရှိနိုင်ပါတယ်s, ဤကိစ္စတွင်အတွက် TWRP Recovery ကိုအတူ SM-G928F မော်ဒယ် Android Nougat သို့မဟုတ် Android 7.0 အတွက် flashed နှင့် Rooted ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » တရားဝင် Android Nougat တွင် Samsung Galaxy S6 Edge Plus အတွက် Root and Recovery
Mauro brunetto ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်တော့်ကွန်ပြူတာကို rooting ပြီးတဲ့အခါမေးပါ ဦး ။ ကျွန်ုပ်သည်တရားဝင်ရမ်ကိုတပ်ဆင်လိုသည်၊ ကျွန်ုပ်ကွန်ပျူတာ၏အာမခံချက်ကိုပြန်လည်ရယူနိုင်သောအမြစ်ကိုဖယ်ရှားလိုသည်။ ပြီးသားမှစ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Mauro Brunetto အားစာပြန်ပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် Samsung Mirrorlick နှင့်ပြproblemနာရှိနေသည်။ အမြစ်ပြီးနောက်ကားထဲတွင်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။ အခြားတစ်ခုကိုဖယ်ထုတ်ပြီးထည့်သွင်းရန်နည်းလမ်းရှိပါသလား။
မင်္ဂလာပါ၊ twrp မှ system ကို reboot လုပ်သောအခါကျွန်ုပ်အဆင်မပြေပါ။ samsung လိုဂိုသည်တောက်ပလျက်ရှိနေသည်။ တစ်ယောက်ယောက်ကတစ်ခုခုသိလား
bootloop အကြောင်းဗီဒီယိုတွင် comment တွင်ကြည့်ပါ။ ခေါင်းငုံ့မပါသောသူရဲကောင်းတစ် ဦး ကအဖြေရှာခဲ့သည်။
Ulefone Gemini Pro ကိုအရောင်ခြောက်မျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်သည်
၂၀၁၇ ခုနှစ်ပထမသုံးလပတ်အတွက်စံချိန်တင်ရလဒ်များကို Samsung ကြေငြာ